Maxaa la gudboon Biden haddii Trump uu xilka isku dhajiyo? - BBC News Somali
Maxaa la gudboon Biden haddii Trump uu xilka isku dhajiyo?
Waa la cusbooneysiiyay 5 Nofembar 2020
Trump ayaa diiday in si nabad uu xilka ku wareejin doona
Mas'uuliyiinta hoggaaminaya ololaha Trump ayaa durba gudbiyay dacwad la xiriirta hannaanka ay u socoto tirinta, iyagoo dalbanaya in gobollada qaar lagu celiyo tirintooda.
Xigashada Sawirka, Reuters / EPA
"Hagaag, waa in dhammaanteen aan ka dhuursugnaa waxa dhici doonaa" ayuu yiri madaxweyne Donald Trump oo shir jaraa'id ku qabtay Aqalka Cad.
Sidoo kale Trump ayaa dacwad la xiriirta dib u tirinta codadka ee gobollada qaar u gudbiyay maxkamad, waxaana uu ku andacoonayaa inay jiraan wax isdaba marin dhanka doorashada.
Mar arrintaas wax laga weydiiyay wuxuu ku jawaabay: "Waxaan si weyn cabasho uga qabaa qaabka codeynta."
"Meesha halaga saaro qaabkan codeynta ah, markaas waxay u dhaceysa si nabad ah, haddii kale ma jiri doonto xil wareejin, waxaa jiri doona is qabqabsi."
Dhanka kale Joe Biden oo ah ninka la tartamaya Trump oo weriyeyaasha kula hadlayay magaalada Delaware wuxuu ku tilmaamay hadalka kasoo baxay Trump "Mid aan macquul aheyn".
Ilaalada gaarka ah ee Madaxweynaha Mareykanka
"Madaxweyne Trump waxaa uu markiiba luminayaa awoodda uu siinayo dastuurka dalka Mareykanka, maadaam uu dhammaaday muddo xileedkiisa", ayey tiri Barbara.
Maxkamadda ugu sareysa Mareykanka
Tirinta codadka ayaa wali ka socota gobollada qaar
Joe Biden wuxuu hadda heystaa 243 cod oo ah kuwa loo yaqaanno " Electoral College", taasoo ka dhigan in uu tirada lagu guuleysanayo ee 270-ka ah uga dhow yahay Donald Trump oo wali heysta 214.
Saqdii dhexe ee xalay - xilliga Mareykanka - waxay soo tabiyeen in ilaa markaas ay jireen codad gaaraya 90,000 oo aan wali la tirinin.
Saameynta Itoobiya iyo Kenya ee arrimaha ictiraaf raadinta Somaliland
Go’aanka golaha wasiiradda ee ONLF iyo Falcelin degdeg ah oo ka dhalatay
Quruxleyda xijaaban ee Soomaalida ah ee quruxda adduunka u tartamaysa
Koobka Afrika: Xulka ciyaarta muhiimka ah dheeli doona iyaga oo aan haysan goolhayeba